आवाज भित्रको आवाज - चारदिशा
September 28, 2014 चारदिशा
कसैको खस्रो आवाज,कसैको मसिनो आवाज,कसैको धोद्रो आवाज, कसैको छिपछिपेआवाज, कसैको चोटिलो आवाज आदि । आवाज बोकेर हिंड्नेहरुको आवाजले आज आवाजसुन्नेहरुबाटै चोटिलो जवाफ खाएको छ । खैत त्यो आवाजको दम ? त्यो आवाजको भरपरेर हामीले के सिक्यौँ त आवाज दिनेहरुबाट ?
हो, सिक्नु पर्ने आवाजलाई सिकाउने आवाजले समाज दिशा-निर्देशको नजीरमागेको छ अहिले । आवाज दिनेहरुको भर्खरै बसालेको नजीरले त डायस्पोरिकसमाजमा त झन उपद्रो मच्चिने पो देखियो त ! सानो खुद्रा समूहको जति पनिअनुविधि देखिएन, यो आवाज बेच्ने र बिचारको व्यापार गर्ने जमातभित्र ।
सबैकासबै ठेक्दारी अहमताले इमान्दारिताको अनिकाल परेकाहरु ! स्वभाव हेर्दालाग्थ्यो केही भर्खरै मृग मार्न जंगल पसेका शिकारी जस्ता, बिभिन्न रङहरुदलेर उग्र आवेगमा शिकार क्षेत्र कब्जा गर्न उत्रेजस्ता । धुन्दकारीले झैँउनीहरुका उग्र आवेगमा सहमतिको सही धस्काइदिनु पर्ने रे ! अचम्म मान्नुबाहेकअमुक विधाताको पनि अर्को मनोदशा के हुन्थ्यो होला र त्यो संग्राममा ? एउटाकुनामा मसिनो स्वर सुनिदै थियो -’खै त, चेतना र अनुविधिको भारीले थिचिएरपसिना बगाउने आवाजहरुको प्रतिनीधि बिम्ब ? अघिल्लो धुन्द आवाजले पछिल्लोनिम्छरो आवाजलाई ठेल्ने नै हो त ?’
गोबर्धनहरु पनि आवाज भित्रको अर्को आवाजका प्रतिनिधि हुन है भन्ने को होत अब ? धुन्द आवाजलाई अर्को आवजले अलिकति उजेलाउन खोज्दा बिचार दिन रप्रभावित गर्न नसक्ने सम्झेछन् केही आवज बोक्नेहरुका मशिहाहरुले । अब तभन्न छाडे हुने नि, -म मा आवाजले स्वर फेरेको छू भनेर । ‘मेरो आवाजकोफेरोले तिमीहरुलाई फन्को मार्न पुग्दैन’ भनेर । हिजो आवाज भित्रको आवाजबनेर सुस्तरी शुष्कहरुलाई धाप मार्ने बिधाता धुन्द वंशको कसरी पाले बस्नसके होलान् !
आवाज भित्रै निसास्सिँदै अर्को आवाज निस्केको छ अहिले । योजमात भित्रैबाटै निस्केको आवाज हो । प्रत्यक यज्ञ स्थलका भित्ताहरुमा कानराखेर सुन्दा हुन्छ, स्वर मसिनो छ, ध्यान दिएर सुन्दा सुनिन्छ । त्यो आवाजमैले सुनिन भन्दा पनि हुने, सुनेभन्दा पनि हुने, बुझेँ भन्दा पनि हुने, बुझिन भन्दा पनि हुने अनौठो तर पवित्र छ । अख्तियारीको अर्को तर्फ पनिरुन्चे स्वरले मेलाको बन्दोबस्तमा निख्खर प्रश्न उठाएको छ ।
‘कठै, न तमेलामा धुन छ, न त आवाज दिँदा दिँदै चिसिएकाहरुको सम्झना ! आवाजहरुमा न तकुनै दम छ,न त कुनै उत्साह, आवेग त झन हुने कुरै भ​एन । ‘कुरा सुनिए -अलिकबढी भरोसा योग्य आवाजहरुको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो होला । सबै गले, रुझे, एकले अर्कोलाई बिश्वासै गरेनन् । गोबर्धनको लाइनमा बस्दा सानो भइने -धुन्दहरुको आवाजले सातो जाने ।
हाय राम ! यी आवाज दिनेहरु!आवाज भित्रको आवाज सुन्न नसक्नेहरु!सबैको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हौ भन्नेहरु ! समाजभित्रका अबयबहरुमा नजीरबसाल्नेहरु !! सत्संगको सल्लाह दिएर सिंगो धर्तीमा उज्यालो ल्याउछौँ भन्नेमहाँयोगीहरु !! के सिकायौँ त तिम्रा आवाज सुन्नेहरुलाई ? धुन्द चरित्र रमहाँ उग्र प्रचन्ड प्रतापी महाराज उग्रशेनको महा भारतको कथा ! बिभत्स्वबिध्वंसकारी महा प्रलयको निम्ता दिने समुन्द्र मन्थनबाट निस्केको हलाहलकोबर्णन र अब्यबस्थै अब्यबस्थाले थेगिनसक्नु कृष्णका सन्तान यदुबंशीहरुकोरोगी राज्य संरचना ?
December 24, 2015 चारदिशा
चारदिशा सम्वाददाता। गैर आवासीय नेपालीहरुले निर्माण गरेको नेपाली कथानक चलचित्र फन्को ईटालीको रोममा प्रदर्शन गरिएको छ। अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार संघ ( अनेकस )को संयोजनमा आइतवार प्रदर्शन गरिएको चलचित्र हेर्न उल्लेख्य मात्रामा नेपालीहरु उपस्थित भएका थिए। नेपाली परिवेशको कथा रहेको फन्कोमा हाँस्य, संवेदना र ईमान्दारितका कथा रहेको छ। चलचित्रको प्रमुख...
नेपालमा थपिए १६१४ कोरोना संक्रमित, थप २३…
काठमाडौं : नेपालमा बिहीबार थप १ हजार ६ सय १४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ...
सरकारको नजरमा सबै उद्यमी, व्यवसायी समान :…
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अतिवादलाई कुनै हालतमा प्रश्रय नदिने बताएका छन...
संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन सरकारलाई संसदीय समितिको…
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई...
विदेश सचिव श्रीङ्लाले गरे प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।...
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट...
काठमाडौं : नेपालमा बिहीबार थप १ हजार ६ सय १४ जनामा कोरोना...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अतिवादलाई कुनै हालतमा प्रश्रय...